Saddex arrimood oo ku saabsan ganacsade Geelle iyo Jabuuti - BBC News Somali
Af-hayeenka Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo dhawaan shir jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay in ay jirto dacwad loo haysto ganacsade Axmed Geelle, oo ka fiuran Soomaaliland gudaheeda.
Waa maxay sirta wiil Soomaaliyeed oo gaaray guulo waaweyn oo ganacsi ah?
Dagaal ganacsi oo ka dhex qarxay Maraykanka iyo Faransiiska
Ninka kaliya ee u tallaabay xeyndaabka shaqooyinka lagu yaqaanno dumarka
"Waxaa jirtay dayn lacageed oo shirkadda GSK ee uu madaxda ka yahay ganacsade Axmed Geelle ay ka qaadatay bangiga faransiisku u leeyahay lacag gaadhaysa 20 milyan, isaga oo ah muwaadin Jabuutiyaan ah, lacagtan ayuu u qaatay in uu ku maalgashado dhismihii shirkadda Coca Cola ee magaalada Hargeysa, lacagtan ayaa ahayd mid uu Axmed ku qaatay in uu si hafto ah isaga bixiyo taasina maysan dhicin, mudo yar ka dib waxaa bilaabmay safarro ay Hargeysa ku yimaadeen wafti ka socday bangiga Faransiiska iyo safriirka Faransiiska ee dalka Kenya, dhamaan waxay wadeen dacwada la xariirta deynta ka maqan, ilaa markii danbe dacwadan la soo marsiiyay wasaaradda arimaha dibadda Somaliland, waxaa loo xil saaray mas'uuliyiin si dacwadan loogu qaado Somaliland, halka uu bangigan qabsaday looyar Somaliland ah", sidaas waxaa warbaahinta u sheegay Af-hayeenka Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
Mas'uuliyiinta Bankiga ayaa sheegay in dacwad u dhexeyso iyaga iyo shirkada GSK ee ganacsade Axmed la buunbuuniyay.
"Ka dib warar xaqiiqda ka fog oo warbaahinta lagu shaaciyey waxaa muhiim noqotay inaan halkan ka xaqiijinno xaqiiqada jirta, iyada oo uu maqanyahay mulkiilaha, shirkadda GSK iyo shirkadaha hoos taga waxay ku jiraan howl gaabis ah oo halis gelin karta jiritaankooda, iyadoo laga duulayo nidaamka sharci ee dalka ka jira GSK iyo dhammaan shirkadaha kale ee hoos taga waxaa maamulkooda la hoos geeyey maamul ku meel gaar ah kaas oo ah kuwa madaxbannaan oo gudan doono howlaha shaqo ee GSK."
Su'aalaha aan wali jawaabaha loo helin ee ku saabsan dilkii Jamaal Khaashuqji